Ndị e chere na ha bụ ndị na-achị ehi wakporo ma gbuo nwanyị na Nimbo
Akwụkwọ akụkọ Vanguard gara n'ihu kọọ na Ada ya nwanyị mere ka nne ya ahụ nwụrụ anwụ mara na ndị na-achị ehi na-abịa ịwakpo ha mana mgbe ọ hụrụ na ha na-abịa ngwa ngwa, o riri mbọmbọ ọsọ ka ọ ga kpọọ ndị ime obodo.
Otu nwoke soro buga ozu nwanyị ahụ nwụrụ anwụ n’ụlọọgwụ Faith Foundation dị na Nsukka metropolis gwara Vanguard na ọ bụ ebe nwanyị ahụ na Ada ya na-eho ahịhịa n’ugbo ka Ada ya nwanyị leliri anya elu wee hụ ndị na-achị ehi na ehi ha n’ime ugbo ha. Ọ kpọtụrụ nne ya tupu ọ gbapụ ọsọ gbagawa ime obodo ịkpọ ndị mmadụ. Mgbe Onyinye kpọrọ ndị ime obodo, ha gbagaruo ebe ahụ ihe mere hụ ebe nwanyị ahụ dile n'ime ọdọ ọbara ya. Mana tupu ha erute ebe ahụ, ndị na-achị ehi ekporola ehi ha ga zokpuo n'ime ọhịa dị nso.
Ọnụ na-ekwuru ndị uweojii n'Enugwu steeti bụ Daniel Ndukwe kwuru na ọ bụ ihe mere eme. Ọ kọwara na ha ebidola nyocha iji nweta ndị omekome ahụ a na-ebo ebubo na ha gburu ya bụ nwanyị n'Ugwujoro Nimbo. O kwere nkwa na ha ga-eme ka ọhaneze mara ihe ha nyochatara.
Onye isi oche otu Miyetti Allah Cattle Breeders Association South East (MACBAN) bụ Gidado Siddiki gụpụrụ ndị otu ya na mwakpo ahụ. Ọ kwụ kwụsie ike na o nweghị ndị otu ha na-achị ehi gara mpaghara ọchịchị Uzo-Uwani nke steeti Enugwu n’ụbọchị ahụ.
O kwuru hoo haa na ọ bụghị onye ọ bụla na-achị ehi a hụrụ n'ime ọhịa bụ onye otu MACBAN.
Nrụtụaka - Vanguard Nigeria
Agbụrụ, asụsụ na omenala Igbo ga-adị!
A gụọla ya ugboro 168